Inja Horoscope 2021: Owona nyaka wakho weCalmest okwangoku - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Inja Horoscope 2021: Owona nyaka wakho weCalmest okwangoku
Abahlobo bezinja, uNyaka we-Ox uya kuba yinto ephazamisayo kuwe, ngakumbi xa kufikwa kwikhondo lomsebenzi wakho. Nangona kunjalo, izinto zikhangeleka zilungile kubomi bakho bothando!
Ngunyaka omhle wenja ethembekileyo, ngaphandle kokuba uthe cwaka kancinci kukhetho lwakho. Ngelishwa, ubomi bakho bobuchwephesha buya kukunika ukoneliseka okuncinci, nangona, ngethamsanqa kuwe, ekhaya uya konakaliswa luthando kunye nomsa. Jonga i-2021 Horoscope yaseTshayina yeNja, ebhalwe ngokukodwa ngokuvumisa ngeenkwenkwezi kwaseTshayina.
Funda uqikelelo lweenkwenkwezi lwe-2021
Kulo nyaka Ukuzola kunye netempo ethe cwaka inokukuzala, kodwa oko akutsho ukuba ungashiya umgcini wakho. Ngokuqinisekileyo kuya kubakho umsebenzi omninzi esitolo kwaye awuzukukhalaza, nangona kunjalo, ngekhe kubekho ukuqondwa okwaneleyo okanye imali oyithandayo. Ngelixa ulinde unyaka ophumelele ngakumbi, kuya kufuneka ubambe kwaye uxhome apho. Iindaba ezimnandi zezokuba, unyaka weTiger ngo-2022 uza kukuzisela intuthuzelo kunye nesiqinisekiso.
Unobuhlobo kwaye uthembekile, uthembekile kwaye unobubele, unezakhono zokumamela ezizodwa, uyingcali yezengqondo kunye nomhlobo onyanisekileyo onokuthenjwa kuzo zonke iimeko. Uyabonakala, ujonge, ukhuselekile ngokubonakalayo kodwa unethemba elincinci, unganukisa ingozi usuka kwiimayile ezikude, ekuvumela ukuba uyiphephe ngobuchule. Ufumene ubulungisa nokunyaniseka, ulandela umkhondo wobuntu bakho kunye nengqibelelo.
imiqondiso ye-ego enkulu
Bazi ubuntu bakho ngomhla wokuzalwa
Njengesilwanyana esithembekileyo, esinyanisekileyo nesinothando, ungumntu othanda iimvakalelo. Uyingcali kwezothando, unelungelo lokuthandana kunye nolwalamano olungaqhelekanga. Uxhotyiselwe ubomi bosapho, ungumntu onothando okhuselayo kwaye uyabacingela abantu kwaye uyamthanda. Ukonwabisa wena, kuya kufuneka uthantamise, uthantamise, uqaphele kwaye uhlale ekuqinisekisa ngamazwi amancinci othando.
Ngubani owona mlinganiso wakho ubalaseleyo?
Lindela ukuba uza kuphila ibali elihle lothando olunomtsalane Ihagu ngubani onokunikela okuninzi. Inkqubo ye- Ihashe iya kuba liqabane elifanelekileyo lendlela onokuhamba nayo kwihlabathi liphela. Kumanyano olugqibeleleyo, kuthando nakwishishini, khetha umntu okhaliphileyo onesisa Ingwe . Kwakhona, ngokufumana ukuthembakala kwe- Umvundla Uya kufikelela kwiindawo eziphakamileyo.
Emva kobuso obukhaliphileyo, inja ehloniphekileyo iyakorobha kwaye iziva ingonelisekanga kwaphela. Kwicala lomsebenzi lezinto, uyakuziva ngathi uthatha inyathelo elinye uye phambili kwaye amabini umva umva. Kwaye, iimali zakho kunye neeakhawunti zebhanki azizukufikelela kulindelo lwakho. Ngethamsanqa kuwe, ubomi bakho bezentlalo buya kuba bobona buhle, kunye nabahlobo kunye nokuphuma kobuhlobo nothando, uya konwaba.
Kulo nyaka i-Yin izakubonakala inde kwaye inesidima kubuchwephesha, ke jinga apho kwaye usabele!
Kwinqanaba lobuqu, ubomi bosapho lwakho buza kukunika ulwaneliseko olupheleleyo, ngaphandle kokucaphuka okwethutyana (27/4). Kwelinye icala, kwicala lomsebenzi, unokuqina kwaye ubambe, kodwa uya kuziva ulikheswa. Kwinqanaba lezemali, uya kutshixa okomzuzwana iintambo zesipaji sakho kwaye ulumkele utyalomali lwakho. Xa kufikwa kuthando, uya kuba yintloko phezu kwezithende ngoFebruwari, ukhathalela iqabane lakho ngo-Matshi, kwaye uzuke ngo-Epreli.
Ihlobo laseTshayina ukusuka ngoLwesithathu, ngoMeyi 5 ukuya kuLwesihlanu, Agasti 6, 2021
Akukho nto ihamba kakuhle kwicala leshishini! Kuya kufuneka uzitsale kunye kwaye wenze iinguqu ezimbalwa, ezinye zazo ziya kuba rhabaxa.
Inja ebekekileyo, kutheni ungavuli abanye kwaye wamkele uncedo lwabo kunokuba uzisizele. Kweli xesha laseTshayina lasehlotyeni, uya kuba nenkxaso kubahlobo bakho, abo usebenzisana nabo nakwigunya lakho. Nokuba kungokutshintsha umsebenzi, imoto, ukuhamba okanye ukuthunyelwa kwelinye ilizwe, Ungathandabuzi ukuveza izimvo zakho kwaye utyhile neminqweno yakho. Ngothando, uya kuba namaxesha olonwabo olunyulu, ujikelezwe ziikerubhi zakho ezithandekayo kwaye uxhaswe liqabane lakho elimangalisayo. Ukuba awutshatanga, uya kuthandana nabantu abaninzi abakuthandayo.
Uthando, uthando, ubuvila. Eli xesha lokuwa lamaTshayina liya kukulungiselela ukumangalisa okuhle kwinqanaba lomntu.
uyifumana njani inombolo yakho yokubala
Ngexesha elizayo leholide, uyakonwabela ikhefu elisempilweni. Isidlo sasemini kunye nosapho lwakho phantsi kwepergola, ukulala egadini, ukuhleka imidlalo nabantwana bakho kunye nokukhanya kwenyanga kuhamba nesithandwa sakho. NgoSeptemba, kwinqanaba lobungcali, Umoya oxineneyo uza kulawula ezi-ofisini kwaye kuyakubakho ukhuphiswano emoyeni, olungazukukucaphukisa. Ngo-Okthobha, uya kumamela ithuba lakho (malunga ne-14/10). Kwinqanaba loluntu, uya kuzinikela kwizizathu ezifanelekileyo.
Ukuphela koNyaka we-Ox kusondela ngokukhawuleza. Kusele iinyanga ezintathu kuphela ukuba ziye, kodwa kuya kubakho amaxesha amnandi ngaphambili.
Ngo-Novemba, uya kuba kwimeko epholileyo kwaye uzikhathaze ngento engekhoyo. Uya kuhlala ulumkile kwaye ukrokrela yonke into kunye nawo wonke umntu. Oku kuyakuchaphazela imetabolism yakho ukuba awuqapheli. Njengokuba kusondela iiholide, uyakuqala isicwangciso 'somThengi weFiva' kwaye uye ekhaya kunye neengalo zakho zizele zizipho ukonakalisa usapho lwakho oluhle. NgoJanuwari, uyakufumana uxolo lwengqondo kunye nokukhonkotha ngolwaneliseko ngokucinga nje ngomNyaka oMtsha womhlobo wakho.
Fumana ikamva lakho ngehoroscope yakho yemihla ngemihla
Ngaba unyaka olungileyo? Fumana kwi-horoscope yakho yonyaka
UkuBekwa kuLuhlu lweeMpawu zeZodiac ukusuka kweyona nto iphumayo ukuya kweyona ininzi
zithini iimpawu zakho zehoroscope
uphupha amazinyo akho ayawa
Indlela yobomi yenombolo ye-9 yemisebenzi
intsingiselo yokomoya ye-3
ukutsala umfazi onomhlaza